ယူဖရေးတီးမြစ်ထဲမှာ ငါးတွေ ထူးဆန်းစွာ သေဆုံး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ယူဖရေးတီးမြစ်ထဲမှာ ငါးတွေ ထူးဆန်းစွာ သေဆုံး
An excavator clears dead fish, from nearby farms, as they float on the Euphrates river near the town of Sadat al Hindiya, north of the central Iraqi city of Hilla, on November 2, 2018. - Iraqi fishermen, south of Baghdad were stunned and angry after finding thousands of dead carp mysteriously floating in their water farms or washed up on the Euphrates' river bed. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP)
ယူဖရေးတီးမြစ်ထဲမှာ ငါးတွေ ထူးဆန်းစွာ သေဆုံး
ယူဖရေးတီး မြစ်ထဲမှာ ငါးတွေ ထူးဆန်းစွာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေဆုံးနေပြီး ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
အီရတ် အာဏာပိုင်တွေကတော့ ရေနမူနာနဲ့ ငါးသေတွေကို စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အီရတ်တောင်ပိုင်း ယူဖရေးတီးမြစ် တောင်ဘက်ဒေသ ဘာဘီမှာ ငါးသိုင်းငါးတွေ သိန်းချီ သေဆုံးနေပါတယ်။ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူတွေကလည်း ငါးတွေ သေရခြင်း အကြောင်းရင်းကို သိချင်နေကြပါတယ်။
ငါးမွေးမြူရေးလုပ်သူ ဟူစိန် ဖာရက်က တချို့က ငါးတွေ ဗိုင်းရပ်ကြောင့် သေတာလို့ ပြောကြပြီး တချို့ကတော့ ဓာတုဗေဒ ဆေးဝါးတွေကြောင့်လို့ ပြောနေကြကြောင်း၊ အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အဖြေရှာပေးဖို့ လိုကြောင်း ပြောပါတယ်။
ယူဖရေးတီးမွဈထဲမှာ ငါးတှေ ထူးဆနျးစှာ သဆေုံး
ယူဖရေးတီး မွဈထဲမှာ ငါးတှေ ထူးဆနျးစှာ အစုလိုကျ အပွုံလိုကျ သဆေုံးနပွေီး ကူးစကျရောဂါကွောငျ့လား၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ညဈညမျးမှုကွောငျ့လားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
အီရတျ အာဏာပိုငျတှကေတော့ ရနေမူနာနဲ့ ငါးသတှေကေို စဈဆေးနပေါတယျ။ အီရတျတောငျပိုငျး ယူဖရေးတီးမွဈ တောငျဘကျဒသေ ဘာဘီမှာ ငါးသိုငျးငါးတှေ သိနျးခြီ သဆေုံးနပေါတယျ။ ငါးမှေးမွူရေး လုပျကိုငျသူတှကေလညျး ငါးတှေ သရေခွငျး အကွောငျးရငျးကို သိခငျြနကွေပါတယျ။
ငါးမှေးမွူရေးလုပျသူ ဟူစိနျ ဖာရကျက တခြို့က ငါးတှေ ဗိုငျးရပျကွောငျ့ သတောလို့ ပွောကွပွီး တခြို့ကတော့ ဓာတုဗဒေ ဆေးဝါးတှကွေောငျ့လို့ ပွောနကွေကွောငျး၊ အစိုးရက စုံစမျးစဈဆေးပွီး အဖွရှောပေးဖို့ လိုကွောငျး ပွောပါတယျ။
Previous articleဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောမယ့် တရုတ်ပညာရှင် နှစ်ဦး ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် အပိတ်ခံရ
Next article၈ နာရီခရီးကို ၇၇ နာရီ ကြာခဲ့လို့ ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်းကို ဒေါသထွက်